Ogaden News Agency (ONA) – Weeraro horleh oy cadawga la beegsadeen CWXO
Weeraro horleh oy cadawga la beegsadeen CWXO
Warar uu nasoo gaadhiiyay wariyaha noga soo warama gudaha Ogaadeenya ayaa waxa uu soo sheegay in maalmahan ay dhacayeen dagaalo u badan mir oo ay naftood-hurayaasha CWXO ku qaadayeen bartilmaameedyo gaar ah kuwaas khasaare naf iyo maalba ah loogu gaystay cadawga.
Dagaaladan oo ka mid ah kuwa sida joogtada ah u dhex mara ciidamada cadawga iyo kuwa naftood-hurayaasha CWXO ayay kuwii ugu dambeeyay ee faahfaahintooda aan helnay ay u dhaceen sidan;
15/11/2011 dagaalka habeenimo oo ka dhacay Daratoole ayaa waxaa cadawga lagaga dilay 1 askari 2 kalana lagaga dhaawacay.
18/11/2011 dagaal ka dhacay Birdhayte oo ka tirsan deegaanka Baabili waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 9 askari waxaana lagaga dhaawacay 15 kale.
19/11/2011 dagaal ka dhacay Qudhac-qalooc oo ka tirsan gunagado waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 11 askari waxaana lagaga dhaawcay 14 kale
23/11/2011 dagaal ka dhacay Haarcaday o oak tirsan Garigo’an waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 5 askari waxaana lagaga dhaawacay 7 askari.
6/11/2011 dagaal ka dhacay Sagalada oo ka tirsan degmada qabridahar waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 2 askri waxaana lagaga dhaawacay tiro kale.
8/11/2011 dagaal ka dhacay Dhadhiin oo ka tirsan degmada Qabri dahar waxaa ciidamada cadawga lagaga 6 askari iyadoo uu jiro dhaawac intaaka badan.
Wariyaha ONA waxa uu intaa ku daray in weerar lagu qaaday kolanyo gaadiid ay xidheen dhiiqo iyo daadad meesha loo yaqaan Uubataale oo ka tirsan degmada Wardheer waxaana halkaa loogu gaystay khasaare balaadhan oo aan dib ka soo faafhfaahin doono.
Wararku waxay intaa ku darayaan inay jiraan mir habeenimo loo gaystay deegaanada kala ah Garida, Galaalshe, Goryo, Cobole iyo Qudhac-dhaareed. Dagaaladan oo dhacay xili habeenimo ayaa cadawga loogu gaystay khasaare lixaadle.
Dhanka kale waxaa jira tacadiyo loo gaystay dad shacab ah oo aan waxba galabsan, dhibaatooyinkaa loo gaysat dadka ayaa waxa ka mid ah dil, xadhig, dhac iyo jidh-dil. Faahfaahinta tacadiyadaa ayaad kala socon doontaan idaacadaheena iyadoo loo gudbin doono haya’daha qaabilsan xuquuqul insaanka.